14 April, 2014 | Ọ dịghị Comments
Nke a na ọnwa anyị informaros ihe:
1. Anyị kwukwara, anọ Spanish kwurula obodo ozi banyere ebe ndị i nwere ike na-aga na-eduzi gị ma ọ bụ na-amụta Spanish maka free.
Anọ n'ógbè ndị:
Andalusia, Cantabria, Valencia na Castilla-León
Ndị a i nwere enwe 9 obodo ke nri n'igbe!
2. Inmigramob kere eke a ngwa mkpanaaka free ịmụta Spanish “kedu, ebe na mgbe ị na-achọ” site web. Na novelti bụ na nke a Ngwa bara uru maka ihe niile di iche iche, mobile igwe, mkpa agaghị “Smart”.
Ha na-enye Free Spanish nkuzi na iji ngwa:
Seville, Welcome Centre na Gbara Ọsọ enyemaka, C / Relator, 6, dị: 954 619 164
Aro Hermanas, Cultural Center nke Montequinto, C / Venice s / n, Metro Europe
Maka ozi ọzọ gbasara: info@inmigramob.com
Ọ bụrụ na i nwere ihe ọzọ ajụjụ, Anyị na-ebe!
Bipụtara: Kwurula Oha obodo di iche, News
Tags: ọmụmụ , Spanish ọmụmụ , News , ego kwurula Oha obodo di iche
Jikọọ 107 ndị ọzọ ndị debanyere aha